June 5, 2021 Xuseen 16
Puntlandtimes (Beledweyne)-Shacab siweyn uga careysan natiijada hordhaca ah ee doorashadii Golayaasha degaanka ee degmada Gibileey ayaa waxaa ay Maanta xirteen wadada xiriirisa Magalooyinka Hargeysa iyo Gibileey ee degaannada Soomaaliland.
Dadkaan oo ka kooban rag iyo dumar ayaa waxaa ay taayaro ay gubeen iyo dhagxaan waaweyn ay ku xireen wadada dhex-marta bartamaha deegaanka Caro-yaambo ee duleedka Degmada Arabsiyo, iyaga oo u diidaya dadka & Gadiidka inay maraan.
Waxaas is laheyn aas laysku waalaa. Lamo goodle iyo dorasho rabsho lee ka sug
How did somaliland become the miracle of democracy in the horn of africa? The purpose of this question is to present three important points for the people of Somaliland who are 70% poor and living in a region of conflict and military rule. However, the people of Somaliland have established a peaceful and democratic nation. 1, the people of somaliland have gone through a long and bloody struggle. 2, the somali government with which they were previously united was a military government where they learned the disadvantages of military rule and improved democracy. 3. The issue of their membership came about after their ideas and opinions were discriminated against, killed, raped, and their property looted as refugees and they made the decision they now have to have an independent and democratic government. People who have gone through these hardships are not supposed to play a role in bringing peace and democracy. They have been building their wealth, minds, knowledge and thinking for 30 years. Let the world know.
Pintigirl… naaaa beenta jooji.
Pinti girl… beeen badanaaa.
Webkan usbuucii Doorashada socotay waa suuxsanaaaa xata waxii aduunka saxaafada dhan Doorashada Ka hadlaysay suuxdin buu Ku jiray Hada markay dhamaatay kulahaa rabshadaa bilowday kkkkkkkk
Dhabayaco Dhadig Sanaa
Dhabayaco Maseyr badanaa
Bahwaynta irirsamaale oodhan ayaa ku faraxsan guusha somaliland ka gaadhay doorashada xalaasha iyo dimuqraadiga ee kadhacday somaliland viva hoyga irirsamaale
Copyland waa goorma doorashadiina dhiigbaxa ah kkkkkkkkk aragnay diwaangalintiinii Dani kaliya isdiwaan galinayey kkkkkkk irirsamaalena waxay idiin balanqaadayaan inay goobjoogayaal idiin soodiri doonaan
Suuliland doorasho kama jidhee sadex habrood oo murqaansan ayaa is cayrsanayay waana la ogyahay filimkooda huuhaada ah. Boodhadh ka waxay kusoo qorteen hal maalin ii hiili aan shansano kuu hiiliyee!!! Dadkuna waxay lahaayeen taasi waa hal maalin ibaaro aan shansano ku baartee wax ka jiraa ma jiraan film ka Iidoor daba naaruf ay dhowrkii sanaba mar dadka u dhigaan. Iidoor waligii dowlad noqon maayo qabiilna ka tegimaayo waxaan xasuustii cayaarihii sanadkii hore Hargaysa lagu qabtay waa tii ay isku madheen kuna dhawaaqayeen sacad muu saas guusha leh!! Markaa Isaaq riwaayadiisa horaa loosoo arkay waana mid dariiq xiran ku dhamaanaysa beesha caalamkana lagu shaxaado.
Allow u siyaadi nabadda suganoo barwaaqo Ku soor Somaliland.
Doorasho xor iyo xalaal ah,shacabku codkooda dhiibteen,si nabad ah kusoo dhamaatay dhammaan gayiga Somaliland ayaa ka qabsoontay Somaliland,ayna Ku loolameen axzaabta qaranku.
Xildhibaan cod Ku filan waayay,abaabul yar oo cabasho ah oo uu sameeyay waxba soo kordhin mayso,waxbana uma dhimayso qarankan gaamuuray,ee Ku dhisan rabitaanka shacabkiisa oo ilaashanaya,ciidamo kala duwan.
Somaliland caalamkii ayaa ka yaaban siday isugu fillaatay,u qabsatay doorashadeeda,halka dalkii ay midoobeen 1960,kalanasoo noqdeen dawladnimadooda 1991 isagoo haysta waxay Ictiraaf caalami ah,caalamku Ku bixinayo dhaqaale balaayiin ah well waxba kasoo naaso caddayn.
Somaliland waxay Ku dhaqaaqdo,jidkay qaaddo ku dayo maahanee Somalia iyo maamuladeedu curin ma leh, waana damiin iyo xaalkii….
ILAAH BAA MAHAD LEH NAGA DHALIYAY DADKAAS IYO DALKAA LAGU FAANI KARO EE AAN LAGA FAANI KARIN
Reer Somaliland xamaasadda iyo caadifadda qabyaaladda ee dhexdooda amase tan ay Soomaalida kale u qabaan waa mid ka xoog badan tan degaannada kale ee Soomaalidu degto ka jirta, sidaa awgeed haddii rabshado dhacaan layaab maleh.
Aniga saddex arrimood ayaa dareenkayga soo jiitay: in la sheegay in doorasho ka dhacday Buuhoodle; murashaxnimada Barkhad Batuun; guusha xisbiga Faysal Cali Waraabe.
Sida Buuhoodle amase degaanno hoostaga doorasho uga dhacday xog kama hayo, waxaanse filayaa inaan codbixin toos ah ka dhicin magaalada Buuhoodle.
Sida ka muuqaata natiijooyinka ilaa hadda hadda la faafiyey, xisbiga UCID ee faysal Cali Waraabe guul muuqata ayuu gaaray. Taasi waxay muujinaysaa in waxa Faysal Waraabe ku hadlo iyo waxa uu aamminsan yahay inay jiraan kumannaan qof oo la qabta. Layaabse maleh sababtoo ah weligay ma arag, mana maqal oday, siyaasi, amase qabiil raalligalin ka bixiyey aflagaaddooyinka iyo waallida uu ku hadlo Faysal Waraabe.
Arrinka yididiilada leh waa murashaxnimada ninka aqoonyahanka ah ee dhallinyarada ah ee kasoo jeeda beesha Gabooye (Madhibaan). Taas natiijadeeda ayaa markhaati u noqon doonta bisaylka iyo iskuduubnida dadka reer Soomaaliland.
Ciddii doonta ha ka xumaato, waxaanse shaki ku jirin in faquuqa iyo cunsurinimada ugu weyn ee Soomaalidu kula dhaqanto dadka Madhibaanka — uu weligiis ka jirey, welina ka jiro degaannada Somaliland. Siyaasiga Cali-gurey ee reer Somaliland wuxuu sheegay in dadka Gabooyeha ay ugu dambeysay metalaad ay ku yeeshaan Somaliland 1960!
Dhanka kale, dadka Gabooyeha ee Somaliland way ka dambeeyaan xagga dhaqaalaha iyo waxbarashadaba qabaa’ilka kale. Waxay ku nool yihiin xaafado u gaar ah (ghettos), oo ah waxa Englishka lagu yiraahdo slums. Degaannada kale ee Soomaalida majirto meel kale oo sidaas amase duruufahaas ka jiraan.
Haddii uu dariiq kaaga horyimaado Barkhad Batuun, qacda ugu horreeysaba waad fahmaysaa inuu reer waqooyi yahay. Haddaba, iyadoo aan ognahay inaan Gabooyeha iyo qabaa’ilka kale isguursan, haddana, dadka sidaa isugu eg waxaad fahmaysaa inay isku isir yihiin. Alloow yaa DNA ka qaada. Soomaalida degaannada kale ee Somalia way aqoonsan yihiin in Madhibaanku yahay walaalahood la faquuqay. Su’aashu waxaa weeye reer Somaliland sidaa oo kale ma aamminsan yihiin mise waxay aaminsan yihiin in iyaga iyo Gabooye ay wadaagaan Afka Soomaaliga iyo diinta Islaamka oo qura?
Jawaabo kookooban oon kaasiinayo arimahaas aad kor kaga dhawaajiyay.
1. ‘xamaasadda iyo caadifadda qabyaaladda’.
Reer Somaliland waxey Soomaalida kale dheeryihiin, foojignaan, firfircooni iyo falcelin degdeg ah.
Laakiinse warkan xaga sare anigu weli maan arag meel laga soo weriyay oonan halkan aheyn.
Labo meelood oo cabasho ka timid waan arkay, waxeyse kala yihiin Berbera iyo Burco. Nimqn badan oo laga badiyay ayaa intey is urursadeen cawdey. Cabashaduna ma xuma. Laakiinse fadqalalo iyo mudaharaad toona ma arkin. Haduu dhab yahay oonan Arkin anigu ma ogi. Sugnaanshiyaha warkan ayaanba xaqiiqsan Karin imika.
Buuhoodle. Doorasho Magaalada dhexdeeda kamay dhicin. Buuhoodle’se waa degmo ka mid ah Togdheer. Laakiinse nawaaxigeeda ayay Doorashadu ka dhacdey. Widhwidh, Qurulugud iyo meelahaas kale ee Buuhoodle hoos taga, degmo ahaan. Insha Allaah Doorka danbe Doorashooyinka Goleyaasha Deegaanka iyo Wakiilada wey ka qabsoomi doontaa. Waxa jira xitaa xaafado Buuhoodle gudaheeda ah oo dadka degeni ay doorashada ka qabsan karayeen. Laakiinse malahayga waxa laga maagay in kuwa kale ee weli Somaliland is diidsiinayaa dhowr tacshiiradood ridridaan oo war nooc kale ahi halkaas kasoo baxo. Ma aragtay sxb in doorkan illaa iyo xitaa kuwii meelahaas orordi jirey juuq laga waayay.
Barkhad Batuun. Barkhad isaga ayaa ugu magac dheer masuuliyiinta Beelaha Gabooye, laakiinse, kolkii Kootadii la rabey in lasiiyo Reerahaas iyo Dumarkuba soconweydey, waxa ay Xisbiyadu isla garteen in xisbi walbaaba xubin soo sharaxo lanasoo wada saaro. Gobolka Maroodi Jeex ayaa loogu jeclaa, kolkaas waxa loo daayay Barkhad oo Wadani ah. Faysal Cali Waraabe ayaana fikradaas lahaa. Kulmiye iyo Ucidna min midh ayay kasoo Sharaxeen Gobolada kale. Waxaanan rajeynayaa iney Sadexduba usoo baxaan. Fikraduna waxey aheyd in Gobol walba Gabooyaha joogaa qolodey doonto ha’ahaatee u codeeyaan ka liiska Gobolkooda kasoo muuqda. Dadka intii kalee rabtaana u codeyso.
Laakiinse xaqirku ma fiicna Araroow. Lixdankii ninkii soo baxay xisbi baa soo sharaxay. Somalilanderska oo dhana wey u codeeyeen. Sheekadaasi is raacii ama isku darkii horteed ayay aheyd. Wixii doorasho dhacady intii la’isku jirey waxey ahaayeen wax bug ah. Reer walbaaba xisbibuu yeeshay. Gabooyuhuna ama Woqooyi ama Koonfur hadey qaar isasoo sharaxeena dhif iyo naadir bey ahaayeen amaba mabay jirin.
Doorkan Somaliland wax wanaagsan ayay sameysay. Dawladii Siilaanyo, kooto ayay u samee is tidhi, Dastuurkeyse arintaasi khilaaftey. Hadana xisbiyadii ayaa si xeeladeysan usoo sharaxay. Madaxweyne Muuse Biixina waxa uu soo jeediyay in Dawlada Somaliland ay bixiso kharashka diiwaan gelinta musharixiintaas.
Sidey doontoba haku dhacdee, Beelahaasi mey heysan awood ay isku soo saaraan. Kolkii la gacan qabtay ee xildhibaano loosoo sharaxayna dee waataasi waa loo codeeyay. Aniga iyo in badan oo naga mid ahi waxaanu jecelanahay in ay xildhibaanadaasi ay soo baxaan. Siiba Barkhad uu noqdo xildhibaanka ugu codka bata. Insha Allaah.
Araroow hadaynaan is yeelyeeleyn Beelaha Gabooyaha ama magacaas xun ee midgaanka loogu yeedho, Soomaali oo dhanbaa takoorta oonan ka guursan. Iyaga iyo Jareertaba. Kuwa Puntland kunoolba xaqiraadi Uma yara. Sabab aad anaga Reer Somaliland ahaan eeda oo dhan noo wada xambaarisaa waa khalad.
Sidaan horeba kuu idhi, Reer Somaliland gidigood Soomaalida kale wey ka ficil badan yihiin. Sababta Gabooyaha Somalikand loo maqli ee loo hadal hayo ee Somaliland ay uga dhex muuqdaan ayaa ah iney si xor ah oon cabsasho laheyn u sheegan karaan cabashadooda. Suldaankooda iyo Boqorkoodu toos ayay Dawlada Somaliland u duraan. Min Agaasime ilaa iyo Madaxweyne u duraan, oo u dhaliilaan. Qabiilada kale iskaga dhiciyaan. Warbaahinta usoo hor istaagaan. Sababtuna waa waxey heystaan xoriyad ay codkooda oo dheer waxey tabanayaan bulshada iyo aduunweynaha ugu soo gudbisan karaan. Maamulada kale ee Soomaaliyeed lama arkayo iyagoo sidaas oo kale u hadlaya. Tacadiyo iyo dhiba wey tirsanayaan, laakiinse baqo ayaa jira ay qabaan ooney dhibtooda ku sheehan karin.
Dhanka guurka waa masiibo xun oo gidigeen inoo wada taala sidaanu uga bixi laheyna wey inoo wada taala.
Ugu danbeyn, Faysal Cali Waraabe.
Gaalka Dil Gartiisana sii baa yidhi. Faysal afka ayuu fadaro ka yahay oo anba ma jecli wuxuu iska yidhaahdo. Laakiinse waa nin aanu uurkiisu bukin. Siyaasadana wax badan buu ka yaqaan. Barkhadba maanta murashaxnimadiisa lama hadal hayeen hadaanu u guntan in Beelaha Gabooye doorkan xildhibaano loosoo saaro. Ciro oo uu soo saarey oo xisbi kale uga digo togteyna umuu haneeyeen xubin xisbigiisa hubanti ahaan ugasoo bixi Karta.
Dhanka kale dee Faysan isagu ma sharaxna ee waxa kuraasida helay, dad xisbiga Ucid iskasoo sharaxay oo Reerahooda ama dadka degaanada ay iska soo Sharaxeen ku nool. Habka proportionate ka ah ee Doorashada Somaliland u shaqeysana waa mid sahleysa inuu xisbi walbaaba wax helo.
Mida kale Faysal haduu hadal qadaf ah yidhaahdo dee isaga ayay Afkiisa ka timid. Aniga iyo Cid kale toona iney raali gelin ka bixiso waajib na saaran maaha. Cidina iney nooga gogol fadhido ma ahan.
Faysal c waraabe.. ayaa Dooroood caayay ., waa sheeeko ciyaaaal, daaroodka siilka ayaa farta laga galinayaa.
Daaroodka. hadii siilka farta laga geliyo way xanaaqayaan.